My freedom: မေဒေး
ဒီနေ့မေဒေးပိတ်ရက်ဆိုတော့ အကြာကြီး အိပ်ပစ်လိုက်တယ်။ Alarm ပိတ်ဖို့မေ့သွားလို့ မနက်(၅း၄၅)ကြီး နိုးလာသေးတယ်။ Alarm ပိတ်ပြီး ပြန်အိပ်တယ်။ ဒီတစ်ပတ်က မနက်(၈)နာရီခွဲ အလုပ်စ,ရတဲ့ အပတ်ဆိုတော့ Lunch Box ထည့်ဖို့ မနက်အစောကြီးထရတယ်။ ဒီနေ့ မနက်စာအတွက် ဘေးခန်းကအစ်မက ခေါက်ဆွဲသုပ်ကျွေးတယ် ^_^
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က Boon Lay သင်္ကြန်မှာ သွားက,လိုက်သေးတယ်။ တိုပါးရိုးသင်္ကြန်တုန်းကလို လူတော့မစုံဘူး။ တနင်္ဂနွေနေ့သွားက,မှာဆို စနေနေ့ညတစ်ညလုံး အစားမှားပြီး (အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ သွားစားမိတာ) ၀မ်းလျောလို့ အိပ်မရဘူး။ မနက်ကျတော့ မသွားတော့ရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားသေးတယ်။ ၀မ်းစ,လျောကတည်းက Loperamide တစ်လုံးသောက်လိုက်တော့ မနက်ကျတော့ နည်းနည်းသက်သာသွားတာနဲ့ ကတိလည်းမဖျက်ချင်တော့ သွားက,တယ်။ နေ့လည်(၁)နာရီလောက် ပြန်ခါနီးတော့ ဗိုက်ကပြန်နာလာတယ်။ သီချင်း(၃)ပုဒ်လောက် က,လို့ချွေးထွက်တာနဲ့ ညက၀မ်းလျောထားတာနဲ့ပေါင်းပြီး လူက Dehydrate ဖြစ်ပြီး ခေါင်းမူးလာတာ... ကိုယ့်ဟာကိုယ်မူးလဲမှာကြောက်တာနဲ့ သိတဲ့အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ကို Taxi ဘယ်နားငှားလို့ရလဲ သွားမေးတယ်။ တကယ်က မသိလို့သွားမေးတာမဟုတ်ဘူး... Taxi စောင့်နေရင်း အခန့်မသင့်လို့ မူးလဲရင် ဘေးနားမှာ ကိုယ်သိတဲ့လူရှိနေအောင်လို့ ဟဟဟ xD
ကန်ဒီ့ဘလော့ဂ်ဖတ်ဖူးတဲ့ အစ်မတစ်ယောက်က လာနှုတ်ဆက်တယ်။ ကန်ဒီသူ့ကိုတစ်ခါ ဗွီဒီယို Edit လုပ်နည်း သင်ပေးဖူးတယ်တဲ့။ အပြင်မှာတော့ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး။ သူကအဲ့ဒါပြောပြတော့မှ မှတ်မိသွားတယ်။ ကန်ဒီ့ကို လာနှုတ်ဆက်ဖူးတဲ့ သူတွေအားလုံး ဖော်ရွေပြီး ချစ်စရာကောင်းကြတယ်။ အဲ့နေ့က အဲ့လိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီး သွားက,နေလို့ စာမရေးဖြစ်လိုက်တာ...
အဲ့ဒီ အရှေ့အပတ်ကတော့ အလုပ်က Teambuilding... တစ်နှစ်တစ်ခါ Branch အသီးသီးက လူတွေနဲ့ အားလုံးပေါင်းပြီး ဆုပေးတာတွေ၊ ဂိမ်းကစားတာတွေ၊ ကံစမ်းမဲဖောက်တာတွေ လုပ်ကြတာလေ။ ကန်ဒီတစ်ခါမှ ကံစမ်းမဲမပေါက်ဘူး(>.<)။
Sentosa မှာလုပ်တာဆိုတော့ ကမ်းခြေနဲ့လိုက်တဲ့ အဲ့လို Theme ၀တ်သွားကြတယ်။ သူများ Branch တွေရဲ့ ၀တ်စုံတွေက ပိုမိုက်တယ်... ပင်လယ်ဓားမြတို့ဘာတို့ (:D)။ နေ့လည်(၁)နာရီတောင် ထိုးတော့မယ်။ နေ့လည်စာ မုန့်ဟင်းခါးသွားချက်လိုက်ဦးမယ်။ ပြီးမှ ဆက်ရေးမယ်နော်...
ဒန်တန်တန်... မုန့်ဟင်းခါးရပါပြီရှင်။ အိမ်ကလူတွေအတွက်ပါ ပိုချက်တယ်။ ကန်ဒီမုန့်ဟင်းခါးစားရင် မပါမဖြစ်တဲ့ နံနံပင်မရှိတော့ စားရတာတစ်ခုခုလိုနေသလို ခံစားရတယ်။ အမေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ရွှေအိမုန့်ဟင်းခါးထုပ်ကို ချက်တာ... (အထင်ကြီးနေမှာစိုးလို့)။ အချိုတည်းဖို့အတွက်က ပန်းသီးနဲ့ ကန်ဒီ့ညီမ၀ယ်ပြီး မစားဘဲ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ကြာနေတဲ့ Sunkist သီး... Humm... အဲ့ဒါကိုမြန်မာလို ဘယ်လိုခေါ်တာလဲ။ ကဗ္ဗလာသီးခေါ်တာ ထင်တယ်...
မနေ့က အလုပ်ကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ကြတယ်။ "Avengers"... ရုပ်ရှင်မကြည့်ဖြစ်တာတောင် ကြာပြီ။ ဇာတ်လမ်း ကောင်းတယ်။ Minion ကားတင်ရင် သွားကြည့်ကြဦးမယ်။ အုပ်စုလိုက် Selfie ရိုက်ပြီဆို အမြဲကန်ဒီ့ကိုပဲ ကင်မရာကိုင်ခိုင်းတယ်။ လမင်းဝင်းဝင်းပပမျက်နှာကြီး ပိုကြီးအောင် >.<
ဒီရက်ပိုင်း YouTube မှာ Vegetarian Recipes တွေ ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အသီးအရွက်များများစားပြီး အသားစားတာကို လျော့ချဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။ အဲ့လိုပြောလို့ ကန်ဒီအသားတွေချည်းစားနေလို့လားဆိုပြီး ထင်နေဦးမယ်။ ကန်ဒီခြေလေးချောင်းမစားတာ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ကြက်သားပါမစားတော့ဘဲ နေမယ်လို့ စိတ်ကရှိနေပေမယ့် ကိုယ့်ဟာကိုယ်မလုပ်နိုင်လောက်ဘူးထင်လို့ အခုအဆင့်(၁)အနေနဲ့ ကြက်သားစားတာကို လျော့ချမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်။ တကယ်တော့ စိတ်ကဒုန်းဒုန်းချပြီးရင် မဖြစ်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီ ဒုန်းဒုန်းက မချရသေးလို့ ဟဟဟ xD
မနက်ဖြန် မေလ(၂)ရက်နေ့... ကန်ဒီ့မွေးနေ့။ ထူးထူးခြားခြား ကဆုန်လပြည့်နေ့နဲ့လည်း တိုက်တယ်။ ကန်ဒီ့မွေးနေ့နဲ့ အမေ့မွေးနေ့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တိုပါးရိုးဘုန်ကြီးကျောင်းမှာ မြေကွက်လှူဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်။
အခုဒီပုံနဲ့ စာရေးနေတယ်။ ခေါင်းလျှော်မှာမို့လို့ အုန်းဆီလိမ်းပြီး ဆံပင်ကို ပေါင်းတင်ထားတယ်။ ဆံပင်တွေ အရမ်းခြောက်နေလို့ ကန်ဒီအရင်ကသုံးတဲ့ Sulphate free shampoo ပြန်သုံးနေတယ်။ ညနေလည်း စောင်းပြီ။ အ၀တ်လျှော်ပြီး ရေချိုးတော့မယ်...
Posted by Candy at 5:23 PM
Happy birthday KLMa.
Forgive me for one dday late.
I'm always looking at the sky,
Searching your flying KITE. GGPa
Bling Bling DnD